သိင်္ဂါလှိုင် – ချိုးဖြူငှက်ကူသံကိုကြားချင်တဲ့ အပြာ – | MoeMaKa Burmese News & Media
သိင်္ဂါလှိုင် – ချိုးဖြူငှက်ကူသံကိုကြားချင်တဲ့ အပြာ –
သံတိုင်းကြားက အပြာ ဖြစ်ခဲ့
အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ထိ ချကျွေးလို့
အပြာဆိုတဲ့အတိုင်း ပြည်သူတွေ မွဲပြာကျလို့
ကောင်းကင်ကြီးလို မြန်မာပြည်ကို ကာကွယ်ပေးနေတယ်
အပြာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်တုန်း
အပြာဟာ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ရှေ့ရှုတုန်း
အပြာဟာ ပြည်သူတွေကို ယုံကြည်ခဲ့
အပြာဟာ ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်ခဲ့
အပြာဟာ ခေတ်ရှေ့ပြေး တပ်ဦးကနေ တော်လှန်းရေးအလံကိုင်ခဲ့တယ်
အပြာဟာ ရိုးသာစိတ်နဲ့ ကမ္ဘာကိုအမှန်တွေချပြခဲ့
ဘဝတခုလုံးကို ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတွက် ပုံအောခဲ့တယ်
သူ့ဘဝ က ငြိမ်းချမ်းခဲ့လို့
သူဟာ သူ့ဘဝအတွက် အပြာရောင်ဟာ
One Response to သိင်္ဂါလှိုင် – ချိုးဖြူငှက်ကူသံကိုကြားချင်တဲ့ အပြာ –
Htwe on April 22, 2016 at 5:44 am
Thank you so much for the touchy pome. We admire BaBa U Win Tin. We appreciate you very much from our heart.